कोरोनाबाट प्रदेश न :१ मा पहिलोपटक १ जनाको मृत्यु ,नेपालमा मृतक संख्या ५२ पुग्यो — Harpraharnews.com
कोरोनाबाट प्रदेश न :१ मा पहिलोपटक १ जनाको मृत्यु ,नेपालमा मृतक संख्या ५२ पुग्यो
१४ श्रावण २०७७, बुधबार हरप्रहर न्यूज
झापा, १४ साउन । प्रदेश न १ मा कोरोना संक्रमणका कारण १ जनाको मृत्यु भएको छ । धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कोभिड १९ उपचार केन्द्रमा उपचारका क्रममा बुधबार ४० वर्षीय व्यक्तिको मृत्यु भएको हो।
विराटनगरबाट गम्भीर अवस्थामा रहेका उनलाई दिउँसो कोशी अस्पताल विराटनगरले धरान रेफर गरेको थियो।
अस्पतालका वरिष्ठ फिजिसियन डा. दिपक सिग्देलका अनुसार मंगलबार कोशी अस्पतालको फिवर क्लिनिकको जाँचका क्रममा शंकास्पद देखिएका ब्यक्तिमा अक्सिजनको कमी देखिएको थियो।
डा. सिग्देलका अनुसार भारतबाट आएका ती ब्यक्तिमा कोरोना संक्रमणको शंका गरिएपछि राति नै पीसीआर नमूना परिक्षण गरिएको थियो । अस्पतालको आइसोलेसन कक्षमा राखेर उपचार गर्दै गर्दा ती ब्यक्तिको अवस्था गम्भीर बनेको उनले बताए।
उनलाई कोशी अस्पतालले बुधबार दिउँसो धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पठाएको थियो।
गम्भीर अवस्थामा रहेका ती ब्यक्तिलाई कोभिड १९ उपचार केन्द्रमा भर्ना गरी उपचारकै क्रममा अपरान्ह पौने चारबजे मृत्यु भएको प्रतिष्ठानका प्रवक्ता निदेश सापकोटाले जानकारी दिए। योसँगै नेपालमा मृत्‍यु हुनेको संख्या नेपालमा ५२ पुगेको छ ।
यस्तै बुधबार नै विराटनगरबाट धरान उपचारका लागि पठाइएका अर्की एक ५५ वर्षीया संक्रमित महिलाको समेत अवस्था गम्भीर रहेको विराटनगर महानगरले जनाएको छ।
यो संगै धरानस्थित वीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका लागि पुगेका ३ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यसअघि, प्रदेश २ का दुईजनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएपनि प्रदेश १ बाट मृत्यु भएको यो पहिलोपटक हो।
‘तिम्रो मायाले मलाई ‘गीतको म्युजिक भिडियो प्रिमियर